netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:First Alert
Onelink Smoke Alarm W/ Battery (2 Pack) Code :SA501CN2
-အရည်အသွေးမြင့်စနစ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော မီးခိုးအချက်ပေးကိရိယာဖြစ်ပါသည်။
Kitchen Fire Extinguisher Code : KFE2S5
Warranty Claim>>10 - Year
Item Length (inches)>>2.9 in
Item Width (inches)>>3 in
Item Height (inches)>>10.1in
Item Weight (lb)>>3 lbs
Auto Fire Extinguisher Powder Type Code : FESA 5
Warranty Claim>>10 - Years
Item Length (inches)>>4 in
သေးငယ်ပြီး ကျစ်လစ်လှပသောဒီဇိုင်းကြောင့် ကားနောက်ခန်းထဲတွင် အလွယ်တကူထည့်ထားနိုင်ပြီး မည်သည့် ကုန်းလမ်းသွား ယာဉ်များတွင်မဆို သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ခိုင်ခံ့ပြီး အကြမ်းခံသော Mounting Bracket ပါရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဘူးကို လျှင်မြန်စိတ်ချစွာ ဆွဲယူအသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ U.S. Department of Transportation (DOT) ၏ ထောက်ခံချက်ရရှိထားပြီး မီးလောင်တတ်သော Liquid (အရည်) များနှင့် လျှပ်စစ်မီးများကိုပါ ငြိမ်းသတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် American Safety Organization (UL) ၏ သတ်မှတ်ချက် 5-B:C အဆင့်၌ ရှိပါသည်။ မီးသတ်ဆေးမှုန့် ကျန်ရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးနိုင်ရန် Push Button ခလုတ်ပါရှိပါသည်။ ဆိုဒီယမ် ဗိုင်ကာဗွန်နိတ် မီးသတ်ဆေး အမျိုးအစားဖြစ်သော ကြောင့် အဆိပ်အတောက်မပါရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့် အပူလျှောက်ကူးနိုင်သော သတ္တိမရှိခြင်း၊ အရာဝတ္ထုများကို တိုက်စားပျက်စီးစေမှုမရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ (၁၀) နှစ် အာမခံ ပါရှိပါသည်။
Tundra Fire Extinguisher Aerosol Spray Type Code : AF 400
Model >> AF400
Warranty Claim >>5 - Years
Item Length (inches)>>2.6 in
Item Width (inches)>>2.6 in
Item Height (inches)>>9.6in.
Item Weight (lb) >>1.6 lbs.
First Alert Tundra (တန်ဒြာ) မီးသတ်ဆေးဘူးသည် Spray Type (စပရေး အမျိုးအစား) ဖြစ်သောကြောင့် ခလုတ်ဖိရုံမျှဖြင့် အလွယ်တကူ ဖြန်းပက်နိုင်ပြီး ခြင်ဆေးဘူးခန့် အရွယ်အစားသာ ရှိ သောကြောင့် သာမန် မီးသတ်ဆေးဘူးများကဲ့သို့ လေးလံပြီး အသုံးပြုရ ခက်ခဲခြင်းမျိုးမရှိပဲ ပေါ့ပါးပြီး ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်မီးသတ်ဆေးဘူးများထက် ၄ ဆ ပိုမို အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အချိန်ကြာရှည်စွာ မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ပါသည်။ First Alert Tundra မီးသတ်ဆေးဘူးသည် Liquid Type (အရည်အမျိုးအစား) ဖြစ်သောကြောင့် အခြားမီးသတ်ဆေးဘူးများကဲ့သို့ ပေါင်ဒါမှုန့်များ တစ်အိမ်လုံး သို့ ပျံ့လွင့်သွားစေခြင်းမျိုးမရှိပဲ အသုံးပြုပြီးပါက အ၀တ်စဖြင့် သုတ်လိုက်ရုံနှင့် ပြန်လည်သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပြီး ဘက်တီးရီးယားနှင့် အခြားပိုးများကြောင့် ဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်းများကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ဘူးအတွင်း မီးသတ်ဆေးရည်များကို အိတ်တစ်ခုနှင့် သီးခြားခွဲထားခြင်းဖြစ်သော ကြောင့် စပရေးခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သောအခါ မီးသတ်ဆေးရည်များကိုသာ ထုတ်လွှတ်စေမှာဖြစ်ပြီး တွန်းကန်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ဓာတ်ငွေ့များသည် ဘူးအတွင်းကျန်နေခဲ့မှာ ဖြစ်သောကြောင့် မီး၏ တောက်လောင်အားကို ပို၍ အရှိန်ပြင်း ကြွတက်လာစေခြင်းကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။ ဟင်းချက်ဆီများ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ သစ်သားနှင့် လျှပ်စစ်မီးများ လောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ငြိမ်းသတ်ပေးနိုင်ပြီး အိမ်တွင်း အသုံးပြုရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
CO/ Gas Combo Alarm Plug-in with Battery Code : GCO1 B
Model >> GCO1
Warranty Claim>>5 - Years
Package Type >>Clam
Color >>White & Gray
Item Length (inches) >>3.1 in
Item Width (inches) >> 1.8 in
Item Height (inches)>>5.6in
Item Weight (lb)>>9lbs
Battery Type >>9VBattery
Num Battery >>1
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များကိုသာမက အခြား ပေါက်ကွဲစေတတ်သောဓာတ်ငွေ့များကိုပါ အာရုံခံပေး နိုင်သော 3-Way Protection ဖြစ်ပါသည်။ Backlit Digital Display ပါရှိသောကြောင့် အာရုံခံမိသောဓာတ်ငွေ့ နှင့် အချက်အလက်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ အခြားမည်သည့်အပိုပစ္စည်းမှ မလိုအပ်ပဲ ပုံမှန်ပလပ်ပေါက်အား လုံး၌ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလိုရှိရာနေရာသို့ အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ မီးပျက်သွားပါ က ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် Battery Backup ပါရှိပြီး Electrochemical အာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြုထား သောကြောင့် သာမန် Alarm များထက် တိကျမှန်ကန်မှုရှိပါသည်။ အလျားလိုက်ဖြစ်စေ၊ ဒေါင်လိုက်ဖြစ်စေ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော Portable Alarm ဖြစ်ပါသည်။ (၅) နှစ် အာမခံပါရှိပါသည်။
Onelink Photoelectric Smoke Alarm with Voice (2 Pack) Code : SA511
Warranty Claim 10 - Years
Item Length (inches)5in
Item Width (inches)2in
Item Height (inches)5in
Item Weight (lb) 2.7lbs
Num Battery 2
ခလုတ်နှိပ်ရုံမျှဖြင့် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်သော Wireless Alarm များဖြစ်ပြီး တစ်နေရာမှ အသံမြည်သည်နှင့် အခြား Alarm များ အားလုံးကပါ အချက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ Photoelectric နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သာမန် Alarm များထက် မိနစ် ၃၀ စော၍ မီးခိုးငွေ့များကို အာရုံခံသိရှိနိုင်ပြီး မှားယွင်းစွာ Alarm မြည်ခြင်းများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။ Model SA511 ၏ အားသာချက်မှာ အိမ်အတွင်း Alarm ၏ တည်နေရာကို သိရှိနိုင်စေရန် နေရာ ၁၁ နေရာအထိ အသံစနစ်ကို မိမိအလိုရှိသလို ရွေးချယ်စီစဉ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ မီးဖိုခန်းထဲတွင် တပ်ဆင်ထားသော Alarm မှ မီးခိုးငွေ့ကို အာရုံခံမိပါက အခြားအခန်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသော Alarm များ အားလုံးကပါ မီးဖိုထဲတွင် အန္တရာယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို အသံနှင့်တကွ သတိပေး အကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါသည်။ (၁၀) နှစ် အာမခံ ပါရှိပါသည်။
Onelink Smoke Alarm W/Battery Code : SA501CN
10 -Years Smoke Alarm W/Escape Designer Code :P910E
Warranty Claim 10-Year Limited
Warranty Package Type Clam
Battery Type 10Years Lithium Powercell
ကျစ်လစ်လှပသော ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး သာမန် Alarm များထက် ထက်ဝက်ပါးလွှာပါသည်။ Photoelectric နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သာမန် Alarm များထက် မိနစ် ၃၀ စော၍ မီးခိုးငွေ့များကို အာရုံခံသိရှိနိုင်ပြီး မှားယွင်းစွာ Alarm မြည်ခြင်းများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။ Mute/ Silence ခလုတ်က Alarm ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး လဲလှယ်သင့်သော သက်တမ်းကို ရောက်ရှိပါက သတိပေးသော စနစ်ပါရှိပါသည်။ အလွယ်တကူ Slide ပြုလုပ်တပ်ဆင်နိုင်ရန် Mounting Bracket ပါရှိပြီး မည်သည့်မျက်နှာကြက်နှင့် နံရံမျိုးတွင်မဆို အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၁၀ နှစ် သက်တမ်းခံ သော လီသီယမ် ဘက်ထရီ ပါရှိသောကြောင့် ဓာတ်ခဲလဲစရာ မလိုပဲ အကုန်အကျ သက်သာစေပါသည်။ တောက်ပသော Escape Light ပါရှိသောကြောင့် အိမ်အတွင်း မီးခိုးငွေ့များပြည့်နှက်ပြီး ထင်ရှားစွာ မမြင်နိုင်ခြင်းများ မဖြစ်စေပါ။ (၁၀) နှစ် အာမခံပါရှိပါသည်။
မှတ်ချက်။	။ P910E တွင် ၁၀ နှစ် သက်တမ်းခံ လီသီယမ် ဘက်ထရီ နှင့် Escape Light ပါရှိ ပြီး
P910 တွင် ၁၀ နှစ် သက်တမ်းခံ လီသီယမ် ဘက်ထရီ သာပါရှိသည်။
P900 တွင် ရိုးရိုး 9ဗို့ ပါရှိသည်။ ကျန်တာကတော့ အကုန်တူသည်။
10 -Years Smoke Alarm Designer Code :P910
10-Years Maximum Protection Photoelectric Smoke Code:P900
Model :SA710 CN
Warranty Claim :10 years
Package Type :Clam
Item Length :5 in
Item Width :1.9 in
Item Height :5 in
Item Weight (lb) : 0.8 Lbs
Battery Type :9V Battery
Photo Smoke Alarm W/Battery Code : SA 720 CN
Model :SA720 CN
Photoelectric မီးခိုးငွေ့အာရုံခံနည်းပညာဖြစ်သောကြောင့် မီးတောက်မဖြစ်ပေါ်သေးခင် တငွေ့ငွေ့စတင် လောင်ကျွမ်းနေချိန်မှပင် စတင်ကာ မီးခိုးငွေ့များကို အာရုံခံပေးနိုင်ပြီး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ရာမှထွက်သော အငွေ့များနှင့် ရေနွေးငွေ့တို့ကြောင့် မှားယွင်းစွာ Alarm မြည်ပြီး အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေခြင်းများကို လျှော့ချ ပေးပါသည်။ Test/ Silence ခလုတ်က Alarm ၏ Function များကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး မလိုလားသော Alarm မြည်သံများကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ဓာတ်ခဲအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သော Drawer ပါရှိသော ကြောင့် ဓာတ်ခဲလဲသောအခါတွင် Alarm ကို မျက်နှာကြက်နံရံပေါ်မှ ပြန်လည်ဖြုတ်နေစရာမလို၍ အလုပ်ရှုပ် သက်သာစေပါသည်။ အထူးအားသာချက်မှာ တောက်ပသော Escape Light ပါရှိခြင်းဖြစ်ပြီး Alarm မှ အချက် ပေးအသံမြည်သောအခါ မီးအလင်းပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် အိမ်အတွင်း မီးခိုးငွေ့များပြည့်နှက်ပြီး ထင်ရှားစွာ မမြင်နိုင်ခြင်းများ မဖြစ်စေပါ။ (၁၀) နှစ် အာမခံ ပါရှိပါသည်။
မှတ်ချက် ။	။ SA720 တွင် Escape Light ပါရှိပြီး SA710 တွင် မပါရှိပါ ။ ကျန်တာအကုန်တူပါသည်။
Innovative Visions Co., Ltd 01-8604418, 09-260031112, 09-260031110 ။
Photo Smoke Alarm W/Battery Code : SA 710 CN
ကျစ်လစ်လှပသောဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးသာမန် Alarm များထက်ထက်ဝက်ပါးလွှာ၍အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Photoelectric နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့်သာမန်Alarm များထက်မိနစ်၃၀စော၍မီးခိုးငွေ့များကိုအာရုံခံသိရှိနိုင်ပြီးမှားယွင်းစွာ Alarm မြည်ခြင်းများကိုလည်းလျှော့ချပေးပါသည်။ Mute/ Silence ခလုတ်က Alarm ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပြီးLED အချက်ပြမီးပါရှိကာလဲလှယ်သင့်သောသက်တမ်းကိုရောက်ရှိပါကအချက်ပေးသောစနစ်ပါရှိပါသည်။(၁၀) နှစ်သက်တမ်းခံသောလီသီယမ်ဘက်ထရီပါရှိသောကြောင့်ဓာတ်ခဲလဲစရာမလိုပဲအကုန်အကျသက်သာစေပါသည်။ (၁၀) နှစ်အာမခံပါရှိပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ PR 710 သည် 10 နှစ်သက်တမ်းခံလီသီယမ်ဘက်ထရီပါရှိပြီး PR 700 တွင်ရိုးရိုး ( 9ဗို့ ) Battery သာပါရှိပါသည်။ကျန်တာအကုန်တူပါသည်။
Slim Round Photoelectric Smoke မီးဘေးအချက်ပြ Alarm Code : PR 710
Item Width (inches) 1.9 in
Item Weight (lb) 0.8 lbs
Slim Round Photoelectric Smoke မီးဘေးအချက်ပြ Alarm Code : PR 700
Model : PR 700
Warranty Claim : 10 –Years
Package Type : Clam
Item Length : 5.125 “
Item Width (inches ) : 5.125
Item Height (inches ) : 1”
Item Weight (lb) : 0.5 lb
Battery Type : 9V Batter
ကျစ်လစ်လှပသော ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး သာမန် Alarm များထက် ထက်ဝက်ပါးလွှာ၍ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Photoelectric နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သာမန် Alarm များထက် မိနစ် ၃၀ စော၍ မီးခိုးငွေ့များကို အာရုံခံသိရှိနိုင်ပြီး မှားယွင်းစွာ Alarm မြည်ခြင်းများကိုလည်း လျှော့ချပေးပါသည်။ Mute/ Silence ခလုတ်က Alarm ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး LED အချက်ပြမီး ပါရှိကာ လဲလှယ်သင့်သော သက်တမ်းကို ရောက်ရှိပါက အချက်ပေးသော စနစ်ပါရှိပါသည်။ (၁၀) နှစ် သက်တမ်းခံ သော လီသီယမ် ဘက်ထရီ ပါရှိသောကြောင့် ဓာတ်ခဲလဲစရာ မလိုပဲ အကုန်အကျ သက်သာစေပါသည်။ (၁၀) နှစ် အာမခံပါရှိပါသည်။ မှတ်ချက်။	။ PR 710 သည် 10 နှစ်သက်တမ်းခံ လီသီယမ် ဘက်ထရီ ပါရှိပြီး PR 700 တွင် ရိုးရိုး ( 9ဗို့ ) Battery သာပါရှိပါသည်။ ကျန်တာအကုန်တူပါသည်။
Min: 25($) Max: 207($)
All မီးသတိပေးစနစ် မီးသတ်ဘူး